Social Landscape Photography ဆိုတာ ဘာလဲ – Featured Collectives
Social Landscape Photography ဆိုတာ ဘာလဲ
Article, social landscape, Social Landscape Photography, Street Photography, StreetPhoto_bw, StreetPhoto_Color, Thi Ha Thu, THT
The Tetons & the Snake River, Grand Tetons National Park, 1942 c, Ansel Adams
Mobile Homes. Jefferson County, Colorado, 1973, Robert Adams
အိမ်ပြန်ချင်တဲ့ စိတ်ဆန္ဒဟာ ပြီးပြည့်စုံချင်တဲ့၊ မိမိဘယ်မှာရှိသလဲဆိုတာသိချင်တဲ့၊ ကြယ်တွေအားလုံးကိုဖြတ်ပြီး ဆွဲလိုက်တဲ့ မျဉ်းကြောင်းတွေဆုံရာ ဆုံမှတ်ဖြစ်ချင်တဲ့၊ နက္ခတ်တာရာပြုလုပ်သူနဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာလို့ခေါ်တဲ့ ကမ္ဘာကြီးရဲ့ ဗဟိုချက်ဖြစ်ချင်တဲ့ စိတ်ဆန္ဒပဲ။ အိပ်စက်ရာကနေ နိုးထဖို့၊ နိုးထနေရာက အနားယူဖို့၊ သားရဲတိရိစ္ဆာန်ကို လိမ္မာအောင် သင်ကြားပေးဖို့၊ စိတ်နှလုံးသား ဆန္ဒရှိရာဖြစ်ဖို့၊ အမှောင်ထုမှာ နားခိုဖို့နဲ့ အလင်းနဲ့အတူ လောင်ကျွမ်းဖို့၊ စကားပြောဖို့မလိုပဲ လုံးဝနားလည်နိုင်ဖို့။
ရေဘက္ကာ ဆိုလ်နစ်၊ နိဗ္ဗာန်ဘုံတံခါးများကို တီးခေါက်ခြင်း – နိုင်ငံရေးအတွက် ရှုမြင်ကွင်းများ
Social landscape photography [SLP] မှာ ဖေါ်ပြတာတွေက ကမ္ဘာကြီးပေါ် လူသားတွေပြုလုပ်လိုက်တဲ့ အကျိုးဆက်တွေပဲ၊ လူသားတွေပြုလုပ်လိုက်တဲ့ ဒါမှမဟုတ် လူသားတွေ ပြောင်းလဲလိုက်တဲ့ ရှုမြင်ကွင်းတွေကို ဓာတ်ပုံရိုက်တာပဲဖြစ်တယ်။ အဲဒီ ဓာတ်ပုံတွေမှာ ပုံမှန် ရှုမြင်ကွင်း ဓာတ်ပုံ [landscape photography] တွေမှာပါတဲ့ သဘာဝ ရှုမြင်ကွင်းတွေပါလေ့ရှိပေမဲ့ သဘာဝလောကအကြောင်း ရိုက်ကူးဖို့ မဟုတ်ဘူး။ ရိုးရာ ရှုမြင်ကွင်း ဓာတ်ပုံတွေမှာ လူသားတွေ၊ လူသားတွေရဲ့ သင်္ကေတဖြစ်တဲ့ လမ်းတွေ၊ အဆောက်အဦးတွေနဲ့ လူသားရဲ့ အကျိုးဆက်တွေဟာ သိသိသာသာ မပါဝင်ကြဘူး။ ကျနော်ထင်တာကတော့ တမင်သက်သက်ကို ထိမ်ချန်ပြီး ရိုက်ကူးတာပါပဲ။
သူမတူအောင် ထူးချွန်ပြီး သူမတူအောင်လည်း ကန့်သတ်ချက်တွေရှိတဲ့ ဓာတ်ပုံဆရာ၊ အထင်ကရ အမေရိကန် ရှုမြင်ကွင်းတွေကို ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ အထင်ကရ အမေရိကန် ဓာတ်ပုံဆရာ အန်ဆယ် အက်ဒမ်စ် (Ansel Adams) ရဲ့ ဓာတ်ပုံတွေကို ကြည့်ကြည့်ရအောင်။ သူ့ရဲ့ ဓာတ်ပုံတွေကို ကျနော် နှစ်သက်ပေမဲ့ အက်ဒမ်စ်ဟာ သူ့ဓာတ်ပုံတွေမှာ လူသားတွေကို ဖော်ပြတာ အင်မတန် နည်းပါတယ် (လူသားတွေပါတဲ့ သူ့ရဲ့ မန်ဇနာ ဂျပန် -အမေရိကန် ထိမ်းသိမ်းရေး စခန်းတွေမှာ ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ ဓာတ်ပုံတွေမှာဆိုရင် လူတွေဟာ ကျောက်တုံးတွေလိုပါပဲ)။
Dust Bowl, Dallas, South Dakota, 1936, uncredited
Yakima Washington, 1939, Dorothea Lange
အက်ဒမ်စ်နဲ့ သိသိသာသာ ကွဲပြားတဲ့ ဓာတ်ပုံတွေကတော့ စီးပွားပျက်ကာလမှာ ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ လယ်ယာမြေ လုံခြုံရေး ဌာနက ဓာတ်ပုံတွေပဲ။ အဲသည်ဓာတ်ပုံတွေက သဲမုန်တိုင်း၊ ထွက်ပြေးတဲ့ လယ်သမားတွေ၊ ဖျက်ဆီးခံရတဲ့ လယ်ယာမြေတွေ စတဲ့ ကမ္ဘာကြီးပေါ်သက်ရောက်ခဲ့တဲ့ လူသားတွေရဲ့ အကျိုးဆက် တွေကို ထင်ထင်ရှားရှားနဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ မှတ်တမ်းတင်ခဲ့တာပဲ။ ကျနော်တို့ လူသားတွေ ကမ္ဘာကြီးနဲ့ ဘယ်လို ဆက်ဆံကြသလဲဆိုတာဟာ SLP ရဲ့ အဓိက အချက်ပဲဖြစ်တယ်။ ဒီတိုးပွားလာတဲ့ နားလည်သဘောပေါက်မှုက ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကျနော်တို့ရဲ့ စိုးရိမ်ရမှု ကို ထင်ဟပ်နေတယ်။
Point de vue du Gras, France, 1826 or 1827, Joseph-Nicephore Niepce
Boulevard du Temple, Paris, 1838. Louis-Jacques-Mande Daguerre
Nelson’s Column under construction, Trafalgar Square, England, 1844, William Henry Fox Talbot
SLP ဟာ ပထမဆုံး ဓာတ်ပုံတွေ သို့မဟုတ် စစချင်း ဟီလိုဂရပ်လို့ခေါ်ခဲ့တဲ့ ဓာတ်ပုံတွေ ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့အချိန်ကတည်းက ရှိခဲ့တယ်။ Niépce ၊ Daguerre နဲ့ Talbot တို့ရဲ့ ပထမဆုံး ဓာတ်ပုံတွေကို ကြည့်ကြည့်ပါ။ အားလုံးမှာ အဆောက်အဦးတွေနဲ့ လူတွေပါဝင်တယ်၊ လူသားနဲ့ ကမ္ဘာကြီးရဲ့ ဆက်သွယ်မှုကို ဖော်ပြနေတယ်။။
Quai d’Anjou du Matin, Paris, 1924, Eugène Atget
New York City, 1888 c, Jacob Riis, from How the Other Half Lives
ပြီးခဲ့တဲ့ ရာစုနှစ်အကူးအပြောင်းကာလက Eugene Atget ကို ကြည့်ရအောင်။ စက်မှုခေတ်က ဖန်တီးလိုက်တဲ့ ပါရီနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဧရိယာတွေမှာ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ ကြီးမားတဲ့ ပြောင်းလဲမှုတွေကို အသိအမှတ်ပြုပြီး၊ နောက်ထပ် အခြားသော အကြောင်းပြချက်တွေ၊ အထူးသဖြင့် ငွေရေးကြေးရေးကြောင့် Atget ဟာ “The City of Light” ကို ကြိုးစားပမ်းစားနဲ့ ရိုက်ကူးခဲ့တယ်။ သူ့လိုပဲ သူနဲ့ခေတ်ပြိုင်ဖြစ်တဲ့၊ ဒိန်းမတ်ကနေ အမေရိကားကို အသစ်စက်စက် ကူးပြောင်းလာခဲ့တဲ့ Jacob Riis ဟာလည်း နျူးယောက်မြို့က အငှားအိမ်ရာတွေကို ရိုက်ကူးခဲ့တယ်။ အဲဒီဓာတ်ပုံတွေက အိမ်ရာဥပေဒတွေမှာ အဓိကကျတဲ့ အပြောင်းအလဲတွေဖြစ်စေခဲ့ပြီး အန္တရာယ်အရှိဆုံး အိမ်ရာဘေးကို အဆုံးသတ်စေခဲ့တယ်။
လက်ရှိ ခေတ်ပြိုင်ကာလက ဥပမာတွေအနေနဲ့ဆိုရင် Alex McLean ရဲ့ ကောင်းကင်အမြင့်ကနေ ရိုက်ကူးတဲ့ ဓာတ်ပုံတွေ၊ Marilyn Bridges ရဲ့ စာအုပ် Markings: Aerial Views of Scared Landscapes နဲ့ Yann Arthus-Bertand ရဲ့ လူသိများ ဓာတ်ပုံ စီးရီးစ် The Earth From Above စတာတွေကို ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
Fleet of B-52 Bombers at the “Bone Yard,” Tucson, Arizona, 1991, Alex MacLean
Mesoamerica, 1986 c, from Markings: Aerial Views of Sacred Landscapes by Marilyn Bridges
Icebergs & Adelie penguin, Adelie Land, Antarctica, date unknown, Yann Arthus-Bertrand
၁၉၇၅ခုနှစ်မှာတော့ ရှုမြင်ကွင်းဓာတ်ပုံတွေမှာ ပိုမိုကျယ်ပြန့်တဲ့ အာရုံခံစားမှု ပါဝင်ဖို့ လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့ အချက်ကို အတည်ပြုတဲ့အနေနဲ့ အထင်ကရ ဓာတ်ပုံပြပွဲနေရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ ရိုချက်စတာက The George Eastman House မှာ New Tapographics: Photographs ofaMan-Altered Landscape ဆိုတဲ့ ပြပွဲ ပြသခဲ့တယ်။ ထူးထူးခြားခြားအနေနဲ့ အဲသည်ပြပွဲမှာ ပါဝင်ပြသတဲ့ ဓာတ်ပုံဆရာတွေထဲက တစ်ယောက်က ရောဘတ် အက်ဒမ်စ် (Robert Adams) ဖြစ်ပြီး အန်ဆယ်နဲ့ ဆွေမျိုးတော်စပ်ခြင်းတော့ မရှိပါဘူး။ အတော်ကို ကွဲပြားတဲ့ ခြားနားမှုတစ်ခုပါ။ ဒီဓာတ်ပုံ အမျိုးအစားရဲ့ အရေးပါမှုကို သက်သေပြချက်အဖြစ် ၁၉၈၁ကနေစတင်ပြီး ဒီပထမဆုံးပြပွဲလို ပွဲမျိုး ကမ္ဘာ့နေရာအသီးသီးမှာ ပြပွဲတွေ ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ ၂၀၁၃မှာ Greg Foster-Rice နဲ့ John Rohrbach တို့က Reframing the New Topographics ဆိုတဲ့ စာအုပ်ကို တည်းဖြတ် ထုတ်ဝေခဲ့ပြီး အဲဒါဟာ SLP ဓာတ်ပုံအမျိုးအစားကို လက်ရှိ အနေအထားရောက်အောင် ဆွဲတင်ခဲ့တယ်။
ကျနော့်ရဲ့ ကိုယ်ပိုင် ဓာတ်ပုံတွေနဲ့ သင်ကြားမှုတွေမှာ အဓိက မောင်းနှင်မှုကတော့ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ရာသီဥတုအခက်အခဲတွေပါပဲ။ ပြီးတော့ ကျနော့်ရဲ့ လားရာအသစ်ကို မြင်မိတယ်၊ ကာလရှည် သန္ဓေတည်ခဲ့ပြီး ယခုအခါ ပိုမို သိသာထင်ရှားလာခဲ့ပြီ၊ Social Landscape Photography ပါပဲ။
Downtown development in Detroit, 2016, photo by Skip Schiel
The New Topographics, on artsy.net
New Topographics: “Landscape and the West – Irony and Critique in New Topographic Photography” by Kelly Dennis
“Deadpan Geometries: Mapping, Aerial Photography, and the American Landscape” by Kim Sichel
“What is landscape – further thoughts” by Bob Coe
Photos of Boston’s new Seaport district
Skip Schiel ရဲ့ What is Social Landscape Photography ဆောင်းပါးကို THT မြန်မာဘာသာသို့ ပြန်ဆိုသည်။